Izinhlelo zeBentley - Geofumadas
ISupermap - isisombululo esibanzi se-2D ne-3D GIS
I-Supermap GIS ingumhlinzeki wesevisi we-GIS osekunesikhathi eside enerekhodi lomkhondo kusukela yaqala ezinhlotsheni ezahlukahlukene zesimo se-geospatial. Yasungulwa e1997 yiqembu lochwepheshe nabacwaningi ngokusekelwa yiChinese Academy of Science, isisekelo sayo se ...
Izindaba eziyi-3 nemicimbi engama-21 ebalulekile kumongo we-GEO - Ukuqala ngo-2019
I-Bentley, iLeica ne-PlexEarth ziphakathi kwezinto ezintsha ezithakazelisa kakhulu eziqala ngoFebhuwari 2019. Ngokwengeziwe, sikhombisa ukuthi sihlanganise imicimbi engu-21 ethokozisayo ezayo, lapho wonke umphakathi wochwepheshe be-geoengineering ungabamba iqhaza khona. Ezinye zezihloko okukhulunywe ngazo kule micimbi yilezi: BIM, GIS, PDI, Geostatistics, ...
IBentley Systems imemezele amaphrojekthi wokugcina wokuklonyeliswa kokuqanjwa okuhle kakhulu ekusetshenzisweni kwezixazululo zesoftware ekuphathweni kwengqalasizinda. Bangu-57 abangene kowamanqamu, abaqhamuka kuma-420 abaqokiwe emhlabeni wonke kulo mcimbi ka-2018. Izinombolo ziyabanda kodwa zibonisa ukuthi kungani unyaka owedlule wawuseSingapore, endlunkulu ...
ikhasi 1 ikhasi 2 ikhasi 3 ... ikhasi 13 ikhasi elilandelayo